China ethengisa eshushu enkulu recycler bong Ukwenziwa kunye Factory | UKUQINISEKISA
• Ukuphakama 30cm
Esi siqwenga senziwe kakuhle senziwe ngeglasi ye-borosilicate eyomeleleyo eyi-4.5mm kwaye ixhaswa sisiseko esomeleleyo, siyenza yomelele kakhulu. I-angle ye-45-degree ye-mouthpiece yenza ukubetha okunethezekayo, kunye nemilo efanelekileyo kuye nabani na oya kwitheyibhile yetafile. Amandla e-Percolation ayisiqhulo kwesi siqwenga, kuphunyezwa i-jellyfish perc enkulu kwigumbi eliphambili leedigri ezingama-360 zokupholisa umsi. Umsi ofakwe umsi uhamba ngeetyhubhu ezimbini zokurisayikilisha, ekhokelela ekubeni iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ipholise umsi wakho ngokukroboza okumangalisayo.
Singathumela kuyo nayiphi na idilesi emhlabeni. Qaphela ukuba kukho izithintelo kwezinye iimveliso, kwaye ezinye iimveliso azinakuthunyelwa kumazwe angaphandle.
Xa ufaka iodolo, siya kuqikelela ukuhambisa kunye nemihla yokuhanjiswa kwakho ngokusekwe kubukho bezinto zakho kunye nokhetho lokuthumela olukhethileyo. Kuxhomekeka kumboneleli wokuthumela owukhethileyo, uqikelelo lomhla wokuhambisa lungavela kwiphepha lokucaphula.
Nceda uqaphele ukuba amaxabiso okuhambisa izinto ezininzi esizithengisayo asekwe kubunzima. Ubunzima bayo nayiphi na into enjalo bunokufunyanwa kwiphepha layo leenkcukacha. Ukubonakalisa imigaqo-nkqubo yeenkampani zokuhambisa esizisebenzisayo, bonke ubunzima buya kusondezwa ukuya kwiponti elandelayo elandelayo.
I-Q1: Ngaba unokuyila kwaye uvelise iimveliso ezintsha kuthi?
A: Ewe, sinokuyila iimveliso ezintsha, kufuneka usixelele ukuba ucinga ntoni, siya kukunceda uyiqonde, kwaye siza kutyikitya isivumelwano semfihlo kunye nawe ukuqinisekisa ukuba ulwazi ngemveliso yakho aluzukuvuza.
Q2: Yeyiphi indlela yakho yokuhlawula?
A: Imigaqo yokuhanjiswa kweFlexible: I-EXW, i-FOB, i-CIF, i-DAP, i-DDU;
Iimali zeNtlawulo ezininzi: i-USD, i-EUR, i-JPY, i-CAD, i-AUD, i-HKD, i-GBP, i-CNY;
Ngokuqhelekileyo siqhuba ukuthengiselana nge-T / T kunye ne-paypal. Ukuba uziva ungakhuselekanga, sinokwenza intengiselwano ngokusebenzisa amaqonga omntu wesithathu anje ngeAlibaba.
Egqithileyo Imibhobho yeglasi yamanzi iiHookahs iiRigs zeRabha zeRAB zokuphinda zisetyenziswe kwakhona
Okulandelayo: I-30cm yokuphinda isetyenziselwe ukuphinda isebenze nge-tube enomsonto kunye neqatha lobusi
I-30cm yokuphinda usebenzise i-bong ngombhobho osongelweyo kunye nobusi ...
UMBILI WOMTHI OPHELELEYO WOKUGQIBELA WOMBhobho WAMANZI